Socialfọdụ Social Media Stats si 2014 iji nyere Atụmatụ 2015 | Martech Zone
Socialfọdụ Social Media Stats si 2014 iji nyere Atụmatụ 2015
Mọnde, Jenụwarị 5, 2015 Douglas Karr
Ọ dị ka a ga - asị na oge ọ bụla anyị nwetara atụmatụ na usoro ebe omume nke atụmanya ntanetị gbanwere. Nanị mgbe niile n'ịzụ ahịa n'ịntanetị bụ na ọ na-agbanwe mgbe niile na anyị ga-adị ngwa iji dozie mgbanwe ndị a.
Kedu usoro mgbasa ozi mgbasa ozi na-eto ngwa ngwa? Kedu nke kacha nta na-ege ntị? Ọnụ ọgụgụ nleta kachasị elu? Kedu ngwa mmekọrịta mmadụ na-eto n'ike n'ike? Didit's infographic kachasị ọhụrụ na-achikota onodu mgbasa ozi ndi mmadu dika 2014 na-eru nso.
Mobile, ọtụtụ ọwa, na visual na-aga n'ihu na-eme omume omume. Ka ị na-eme atụmatụ 2015, ị na-etinye usoro ndị a n'ime mkpọsa ahịa gị? Ugbu a bụ oge!
Tags: 2014Ntọala 2014merekasị na-eto eto na netwọkgoogle +multi-netwọkPinterestsnapchatelekọta mmadụ mgbasa ozi afọeziokwu mgbasa ozitumblryoutube